A na-etinye mkpọchi na weft dịkarịa ala otu oge, a na-agbakwunye mkpọchi mmiri na weft na-agbanwe ịgbanwe akwa ma na-akpọkọta ha ọnụ dị ka twill weave. Ọdịdị nke akwa ahụ dị twill abụọ dị elu na 45 Celsius diagonal akwa, ụkpụrụ nke twill n'ihu dị ọcha ...GỤKWUO »
Enwere akwa abụọ dị na akwa ọgwụ TPU a. Nke mbụ bụ akwa nke nkpa. Ọ bụ akwa a kpụrụ akpụ. Ngwunye dị ala bụ ihe nkiri TPU. Ọ na - eme ka akwa ahụ bụrụ nke ikuku na - enweghị mgbochi. Igwe TPU dị nro ma na-agbanwe agbanwe nwere ike ime ka ike akwa ahụ na akwa ya dị elu. Njirimara: ...GỤKWUO »
Na Eprel 10, ụlọ ọrụ anyị gara Vietnam iji sonye na ihe ngosi ahụ, na-egosi ngwaahịa ndị kachasị na ụlọ ọrụ anyị: akwa akpa, akwa ihe mkpuchi ahụ, na-enye ndị ahịa ngosipụta nke ngwaahịa na ike nke ụlọ ọrụ ahụ. Hebei Ruimian Fabric Co., Ltd ...GỤKWUO »